Nuxurka Qoraal Uu Madaxweyne Mustafe U Diray Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Iyo Waxyaabihii Uu Kaga Hadlay - Jigjiga Online
HomeSomalidaNuxurka Qoraal Uu Madaxweyne Mustafe U Diray Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Iyo Waxyaabihii Uu Kaga Hadlay
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa qoraal u diray Ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya, Dr. Abiy Ahmed maalintii Jimcaha, sida ay daabacday warbaahinta Addis Standard.
Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed oo ku jira damaashaadka guushii loogu caleemo-saaray Abaal-marinta nabadda ee Nobel Peace Prize, ayaa waxa uu helay qoraal ka yimid Madaxweyne Mustafe, kaas oo qayb ka noqday dhambaalladii tirada badnaa ee uu maalintaas helay.
Qoraalkan oo ahaa mid hambalyo ah, ayaa waxa uu madaxweyne Mustafe ku yidhi: “Si xad-dhaaf ah ayaan ugu faraxsanahay go’aanka guddida Abaal-marinta nabadda Nobel Peace Prize ku siiyeen Ra’iisal Wasaare Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy wuu u qalmaa aqoonsiga nabaddii uu ka dhex abuuray Ethiopia iiyo Eritrea, taageeradii uu siiyey hannaankii nabadeynta Sudan iyo ajandaha wajiyada badan ee isbeddelka uu ka hirgeliyey Itoobiya. Shacabka Dawladda Deegaanka Soomaalidu waxay ka faaíidaysteen ajandihiisa nabadgelyada iyo is-dhexgalka gobolka Geeska Afrika. Hambalyo dhamaan dadka reer Itoobiya, reer Afrika iyo muwaadiniinta dunida ee nabadda jecel.”